अन्ततः मन्त्री आलेले पशुपति धर्मशालामा होटल चलाउने बताससँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेरै छोडे — onlinedabali.com
काठमाडौं । अन्ततः पशुपति धर्मशाला लिजमा लिएर होटल चलाउन बतास अर्गनाइजेसनसँगको भएको सम्झौता हुने भएको छ । मंगलबार बसेको पशुपति क्षेत्र विकास संचालक परिषद्को बैठकले बताससँगको सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक पहुँच र आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गरी धर्मशाला जिलमा लिएको निष्कर्ष निकाल्दै परिषद्ले सम्झौता रद्द गर्ने त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले धर्मशालामा होटेल चलाइरहेको बतास अर्गनाइजेसनको होटेल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । जसमा कोषका सञ्चालक परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बराल र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे सदस्य छन् । समितिले होटेल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण लिएर सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने म्यान्डेट पाएको छ ।
परिषदबाट स्वीकृति नै नलिई सेटिङका आधारमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले ३० वैशाख ०७६ मा बतास अर्गनाइजेसनलाई होटेल चलाउन धर्मशाला लिजमा दिएका थिए ।
मन्त्रीले आलेले धर्मशालाको अवलोकन गर्दै कानुन विपरित सम्झौता भएको पाइए रद्द गर्ने बताएका थिए । सम्झौता रद्द नगराउन आनन्द बतासले ठूलो चलखेल गरेपनि सफल हुन सकेनन् ।